I-Testosterone Undecanoate powder for bodybuilding | AASraw
I-Testosterone i-Undecanoate powder yokuvuselela umzimba
/Blog/Testosterone Undecanoate/I-Testosterone i-Undecanoate powder yokuvuselela umzimba
ezaposwa ngomhla 04 / 04 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Testosterone Undecanoate.
I.Raw Testosterone engaxhomekiyo-powder Isiseko:
igama: Testosterone Undecanoate
Isisindo somzimba: 456.7
I-Testosterone engekho ipetroli enye yeendlela ezintsha zonyango lwe-Low T kumadoda. Ukuvunyelwa kwayo kwi-2014 ekusebenziseni eUnited States kwongeze olunye uhlobo lwe-testosterone yonyango oluthathelwayo kwi-arsenal yezixhobo oogqirha abanakho kuwo ukuphakamisa amanqanaba e-testosterone egazini.
Zileyo igama le-brand ye-testosterone engama-nonecanoate powder ekhoyo e-US. Indlela yokwenza lolu hlobo unyango luhluke kwezinye iifom ze-testosterone. Nangona i-testosterone undecanoate powder shot ilawulwa nge-intramuscularly ngendlela efana neyezinye iintlobo ze-testosterone injected, oku akukona unyango umntu angayenza ekhaya lakhe.
Ngenxa yeemeko ezinobungozi obuphezulu eziza kubanjelwa kwicandelo elichaphazela iziphumo ezingezantsi, i-testosterone engekho emfutshane ipayipi kufuneka ilawulwe kwiofisi yegqirha. Kukho ngokuqhelekileyo kubekho intlawulo eyongezelelweyo kule ofisi ukutyelela kunye noogqirha abaninzi.
Ukunyangwa kwonyango kwindoda engaphezulu kwe-18 yi-3 ml (750 mg) nge-injection ye-injuscular. Oku kulandelwa ngokulingana okufanayo emva kweeveki ezine. Unyango luya kuqhubeka rhoqo emva kweeveki ezilishumi emva koko. I-injtosterone engafanelekanga iinjenki ayifanele ayinike umntu oneminyaka engaphantsi kwe-18.
Indlela yokusebenzisa i-Testosterone Undecanoate powder Isisombululo sokwakha umzimba?
Funda Isikhokelo seMithi esinikezwa yi-pharmist yakho ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa le mayeza kwaye ngexesha ngalinye ufumana ijojo. Ukuba unemibuzo, buza ugqirha wakho okanye umasipala.
Eli nyanga linikezwa ngejoyiki kwisigxina somgubo njengoko ugqirha ugqirha wakho. Emva kwesosi sokuqala, kaninzi kunikwa iiveki ze-4 kamva, emva kweeveki ze-10. Imilinganiselo isekelwe kwiimeko zakho zonyango, amanqanaba egazi le testosterone kunye nokuphendula kunyango.
Sebenzisa le mayeza rhoqo ukuze ufumane inzuzo enkulu kuyo. Ukukunceda ukhumbule, sebenzisa ikhalenda ukuphawula iintsuku ozakufumana ijojo.
Ukusetyenziswa kakubi okanye kakubi testosterone kunokubangela iziphumo ezinzulu zesifo ezifana nesifo senhliziyo (kubandakanya ukuhlasela kwentliziyo), isifo, isifo sesibindi, iingxaki zengqondo / kwemizwelo, ukuziphatha okungaqhelekanga kweziyobisi, okanye ukukhula kwethambo okungafanelekanga (kwiintsholongwane). Musa ukwandisa umthamo wakho okanye usebenzise le mveliso rhoqo okanye ixesha elide kunokuba lisiwe. Xa i-testosterone isetyenziswa kakubi okanye iphathwa kakubi, unokuba neempawu zokurhoxisa (ezifana nokudandatheka, ukukhubeka, ukhathala) xa unqwenela ukuyeka ukusebenzisa iziyobisi. Ezi zimpawu zingapheli kwiiveki ukuya kwiinyanga.
Tshela ugqirha wakho ukuba imeko yakho ayiyi kuphucula okanye ingaba ibuhlungu.
Ziziphi ezinye izinto endizidinga ukuba ndizazi okanye zenze ntoni ngelixa ndithatha i-Testosterone Undecanoate powder Injection?
Xelela bonke ababonelela ngempilo yakho ukuba uthathe i-testosterone engenakucala. Oku kubandakanya oogqirha bakho, abahlengikazi, amayeza kunye namazinyo.
Ukuba uneshukela eliphezulu legazi (isifo sikashukela), kuya kufuneka ujonge ushukela wegazi ngokusondeleyo.
Kukho ithuba eliphezulu lomhlaza wesifo seprotate. Thetha nogqirha.
Ukuba une-prostate eyandisiweyo, imiqondiso yakho ingaba yingozi ngakumbi xa usebenzisa injenstercerone engenanto yecala. Biza ugqirha wakho ukuba oko kwenzeka kuwe.
Uxinzelelo oluphezulu lwegazi lwenzeke ngeziyobisi ezifana nale. Igazi lakho litshutshwe njengoko uxelelwe ngugqirha wakho.
Unyango kunye nejoyi ye-testosterone engenakucala ingakhokelela kwi-cholesterol ephezulu kunye ne-triglycerides. Umphumo wale nguqu kwimpilo yentliziyo ayiyazi. Thetha nogqirha.
Eli gama lingakhulisa ithuba lamacandelo egazi, isifo, okanye isifo senhliziyo. Thetha nogqirha.
Eli liyeza li anabolic steroid. Iziyobisi ze-antibolic steroid ziye zaphathwa kakubi kwaye zingasetyenziswa kakubi ngaphambili. Ukuxhatshazwa kwe-antibolic steroid kungaholela ekuxhomekeke kwiinkalo zempilo. Ezi ngxaki zempilo ziquka intliziyo okanye iingxaki zeengxube zegazi, izibilini, iingxaki zesibindi kunye neengxaki zengqondo okanye zengqondo. Thetha nogqirha.
Ukuba uneminyaka eyi-65 okanye ngaphezulu, sebenzisa ijokelelo ye-testosterone engenakucala ngokunyamekela. Unokuba nemiphumo emibi yecala.
Eli liyeza alivunyelwanga ukunyanga amazinga aphantsi e-testosterone abangelwa ukukhula. Thetha nogqirha wakho.
Eli liyeza lingachaphazela ummi kumadoda. Oku kunokuchaphazela ukukwazi ukuzala umntwana. Thetha nogqirha.
Eli gama alivunyelwanga ukusetyenziswa kwabantwana. Thetha nogqirha.
iinzuzo testosterone undecanoate powder
Nangona kubonakala ngathi i-testosterone i-nonecanoate powder benefits iya kufana nayo nayiphi na enye indlela ye-testosterone unyango, oku akunakwenzeka njalo. Ukunciphisa ukusetyenziswa okumiselwe yimingcipheko ebandakanywe kwicandelo elilandelayo lithintele ukuba lube yindlela ephakanyisiweyo yokunyangwa kwe-T T.
Abantu abanomdla kuzo usebenzisa i-testosterone engaxhomekiyo i powder iyithengela kwiiwebhusayithi ezingekho mthethweni kwi-intanethi kwiimeko ezininzi. Oku kunokunciphisa okanye ukunciphisa iintlawulo ezinxulumene nezinye iindidi ze-testosterone zonyango oluthathelwa njengolu hlobo:
Ubuthambo obukhulu kunye namathambo
Imisebenzi engqondweni kunye nememori
Ukuphucula impilo yentliziyo
Ulwabelana ngesondo kunye ne-libido
Ekubeni i-testosterone ye-nonecanoate injection dosage kufuneka ilawulwe ngunyango oqeqeshiwe ogqirha ekliniki okanye kwindawo yeofisi, unyango luvame ukubiza ngaphezu kwe-testosterone cypionate protocol.
Imiphumo emibi ye testosterone undecanoate powder
Ngaphambi kokuba sifinyelele kwimiphumo emibi echaphazelekayo eya kuvela ekufumaneni i-testosterone i-undecanoate dosage, kukho isilumkiso esinzulu sokunikezela. Ukusetyenziswa okubonakalayo kunokubangela ingxaki enkulu, nokuba yingozi yengozi yomphunga ebizwa ngokuba yi-pulmonary oil microembolism (POME). Oku kungabandakanya ukunyusa ukwanda emqaleni, isixwaba, intlungu yesifuba, ukukhuthaza ukukhwehlela, kunye ne-syncope.
Kukho esinye isilumkiso se-testosterone-undecanoate powder: abahlali base-USA baye, bathi ngezinye izihlandlo baxela ingxaki enkulu emva kokufumana i-injection. Yingakho izigulana kufuneka zilinde kwiofisi yegqirha kwii-30 imizuzu emva kokutshulwa kwe-testosterone undecanoate powder. Ukusetyenziswa kwe-Aveed kufumaneka kuphela ngeprogram ekhutshelwe.
Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo ezinokuthi zenzeke xa ufumana i-testosterone i-powecanoate powder athengiswa ziquka ezi zilandelayo:
Amanqanaba aphezulu e-estrogen egazini
Ukuxhalabisa okanye ukuxhatshazwa
Ukukhula kweenwele okanye ukulahleka
Utshintsho kwi-sex drive kunye nokusebenza
Ubuhlungu kwisiza sokujola
I-acne okanye isikhumba seoli
Nangona kuvunyelwe ukuba kusetyenziswe eUnited States, i-testosterone i-nonecanoate powder ifanele isetyenziswe kuphela xa iinzuzo zingaphezu kwezinto ezinobungozi ezinokuthi zixoxwe ngazo.
tags: uthenge i-Testosterone Undecanoate powder, I-Raw Testosterone Undecanoate powder, I-Testosterone Undecanoate powder
Thenga i-Bupropion HCL powder: isebenzise, ​​umyinge, umphumo	Nandrolone Decanoate powder vs Nandrolone phenylpropionate powde